I-flower landscape | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba I-flower landscape
I-geicher ne-flower landscape
Ukuze unikeze ama-flowerbeds, ngezinye izikhathi isitshalo esinamaqabunga amakhulu emibala ehlukahlukene ne-shades isetshenziselwa - lena yi-geyhera, leyo, ngenxa yalokhu, eyamukelwe kabanzi ekusungulweni kwezwe. Lesi sitshalo sasivela eNyakatho Melika futhi, ngenxa yemizamo yabalimi, sathola umbala ogqamile oqhakazile kanye nokuhlala ngokuphumelelayo emakhaleni ethu.
Enye yezitshalo ezingahlobisa umbhede wakho wembali yi-heliotrope. Ukukhangisa kwalo kukhanyabeka, okungahlosiwe okungahambi kahle nge-vanilla iphunga. Isici esikhethekile se-heliotrope yikhono lokuguqula izinhloko zezimbali emva kokuhamba kwelanga. Ngakho igama lesitshalo, elisho ngesiGreki lisho "ukuguqula ilanga."
Izici zokutshala i-cornflower: ukutshala nokunakekelwa ensimini
Abantu abangeke bathande i-chamomile, kunzima ukuthola. Lembali enhle ibhekwa njengophawu lothando. Amantombazane azovuma ngokukhethekile ngalokhu: ngamunye wabo okungenani kanye wadlala umdlalo "othanda-ongakuthandi", okhishwa yi-petal. Uma ufuna ukukhulisa lesi simangaliso ensimini yakho yemifino, okokuqala kuyoba usizo kuwe ukuthola ukuthi i-chamomile yensimu empeleni ibizwa ngokuthi i-nursery, bese sizokukhuluma ngokutshala nokuyikhathalela emhlabathini ovulekile.